Yedayimane elimnyama eqoqweni lakho siqu: thatha amajazi waseGreece
itshe Mystic ukuthi umxhwele nje kuphela amaJuda ocebile Jewelers, abaqoqi kanye padishahs Arab-incognito, kodwa futhi abadali noboya ezimnyama mink. noboya zikanokusho futhi obukhulu igwababa ngakho ubenyezela futhi agcwala ekukhanyeni, ukuthi kufanele ngokuthi i- "abamnyama".
Futhi njengoba kuba inkulumo esitebeleni is ngolimi ozinikezele lanamuhla sifakwe - akunakwenzeka ukuba babe izinhliziyo a yimpumelelo subjugator zabesilisa, langa femme fatale, akuyona Zaim eqoqweni lakhe siqu abamnyama - emangalisayo mink elingenamikhono. Noma okungenani ijazi. Nakuba Bolero abanye ... qaphela abesifazane yenza ngokuphelelwa yithemba ngomona ukubheka emuva izimbangi e uboya, a olungenamkhawulo ngempela.
Kodwa etotoswayo, wayemthanda, umuntu angabona cishe wonke umuntu, ngisho noma kuyinto - uhambo yonyaka umkhaya ukuba igumbi ofanelekayo, manje noma ngokuhamba kwesikhathi, ngisebenzisa onesibindi yihlane ezinjalo. Lapho ukuthenga mink coat "abamnyama" - luhlobene eduze imoto kuqala ukuphila komuntu, i- "molt" lokuqala Babukeka babahle kepha mine ugly - dada ukuqala ukuphila kusukela ngaleso sikhathi, washintsha Gait nesithombe, ngokuvamile, ijazi kuyinto ennobles elingenakuphikwa. On the esezingeni nomkhiqizi noboya njengamanje imi izipho libalele nowokupha Greece.
Kunengqondo, ukusuka lapho, ogwini olunamadwala Aegean Sea, ehlaselwe esibucayi ezweni peninsular eziphehliwe izilwane ubuka? Uthulisa engqondweni: black idayimane amazwe eGreece emazweni-abanikezeli uboya, ezifana eCanada nase-United States, kanye, yobuciko lapha, ngokuya cheapness imishini kanye nezisebenzi, amasiko eminyaka ubudala quality kanye nezimali ongaphakeme ithungwe.
Esikhathini ukukhiqizwa fur Greece - kunjani Japan ekukhiqizeni izimoto: emakethe linikeza abaningi elinegazi Chinese, kodwa sihleka ngokwesasa yobuso babo, ngoba ngempela yemoto Umthandi ngabe Ungahahi kwi ezishibhile.
Izinto zokusetshenziswa, okungukuthi, izikhumba ithengwe ku exchange isitokwe emazweni umphakeli nge-quota ukuzalaniswa kwamahhashi kanye ukudubula izilwane (sorry, grinpisovtsy!). Fur ukuhweba njengamabhere amasheya noma okusanhlamvu - kungenzeka ukuphetha inkontileka ikusasa nokulethwa beqembu isizini ehlobo, futhi izinyanga 2-3 "topstitch" abamnyama izinga ngobungako, bese ukuthatha nokuqaliswa kwalo for the nobusika. Yilowo umehluko kuphela wukuthi ezikhethiwe ukuthengisa noboya ebusika ine undercoat eyengeziwe - izikhumba enjalo ikakhulukazi kwabantu nengcebo izinwele.
Izici isitayela cut amajazi "abamnyama"
Lapha-ke ngeshwa, ruchenki yethu ezimhlophe ezihambisana amathuba zezimali - ngabe ijazi "idayimane abamnyama" kukhethiwe ubude kuye ozwaneni, noma kufanele avalele nenhle ivesti / amajazi. By the way, Vest futhi Bolero - mikhuba, kwamukelekile inkathi yokuhlala okuqhubekayo kule ezokuthutha kanye enhle kuhlobisa dress kusihlwa.
Futhi, intengo imikhiqizo ehlaselwe impahla cut. Njengoba yaziwa, mink - hhayi inkosi yezilwane, ubungako bawo akuzange kubethuse, ukuze noma iyiphi noboya "abamnyama" ithungwe kusukela izingcezu noboya. I ezincane squaring ichopho - futhi intengo aphansi ngakhoke ukufana ukukhanya ngenxa inani elikhulu yaseZimbabwe.
Lapho uthenga umkhiqizo, ukuhamba iminwe yakho ngokumelene okusanhlamvu, sihlola izindawo okwakubulawelwa kuzo isikhumba: kufanele kube olumhlophe. Yilokhu esikubiza baxwayisa of elinegazi okungavumelekile ngokwenza noboya ngombala omnyama. Ngaphezu kwalokho, ijazi akufanele abe imibimbi, nezimagqabhagqabha Bald, akukho "partings" imfashini kanye nanoma yimiphi eminye zamehlo. Kufanele kube isisindo umxhwele - nokuthi kuzofuneka ukuthi aqinise sibalo ethambile ejimini ukujabulela Unelungelo lokugqoka kwaleli bhokisi.
Sales eFinland, noma yini ukuthenga ngenkathi izaphulelo?
Sundresses lwesikhundla - kancane uthando luvutha yokugqoka
Indlela ukukhetha izingubo? Usayizi 42 - a kophawu elula futhi kuyaqondakala izingubo zabesifazane
Siyaqonda ukuthi ubambisane ezifana
Mary Aronov: Biography, Filmography, ukuphila siqu, izithombe
Panthea Holiday Village 4 * (Cyprus, Ayia Napa): incazelo ehhotela, imisebenzi, ukubuyekeza
St Alexis, umuntu kaNkulunkulu: ukuphila, isithombe, isithonjana, Usuku St Alexis, umthandazo St Alexis
Ukumelana Frost namanzi ukumelana ngokhonkolo. Ibanga ngokhonkolo frost ukumelana naso futhi kwenze ukumelana namanzi. admixtures Ukhonkolo ngoba amanzi angangeni
Okweqile elangeni e ingane. Izimpawu ukushisa unhlangothi
Gmini MagicBook T6LHD: ukubuyekezwa. Gmini MagicBook T6LHD: izici, imiyalelo yokusebenzisa
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka aluhlaza okwesibhakabhaka. Aluhlaza okwesibhakabhaka ukuze umbono. zokupheka kwesiko
Kuyini design ezimbonini?